Nagu saabsan - Jiangsu Three Sheep Garden Products Co., Ltd.
Jiangsu Three Sheep Garden Products Co., Ltd. waxay ku taalaa Changzhou, gobolka Jiangsu, Shiinaha, tareen xawaare sare wata oo ka socda Shanghai. Laba garoon diyaaradeed oo qiyaastii 40 daqiiqo u socda meel u dhow.
Waxaan nahay soo saarista iyo ganacsade noocyo kala duwan oo balaastig ah sida Anti Bird Netting, Plastic Trellis, Plant Support Net, Gutter Guard Mesh, Sleeve Netting, Deer Fence, Pea and Bean Netting, Anti Hail Netting, cayayaanka shabaqa, net netka, qalabka , iwm
Warshadda ayaa la helay 2008, waxayna leedahay 13 sano oo soo saaritaanno amarada dhoofinta ah. Waxaa u adeegta 20 xariiq oo wax soo saar ah imikana way sii kordheysaa. Ka sokow tayada wax soo saarka, Waxaan sidoo kale muhiimad siineynaa horumarka iyo hal-abuurnimada, gaar ahaan soo saarista walxaha kala duwan ee balaastigga ah iyo qaabeynta qaabab xirmo oo wanaagsan oo lagu dabooli karo shuruudaha kastamka. Alaabtayadu waxay u dhoofisaa dhammaan lixda qaaradood marka laga reebo Antarctica, annaguna waxaan ka mid nahay kuwa ugu aaminka badan alaab-qeybiyeyaasha dhowr dukaan. Waxaan had iyo jeer noqon doonaa qadarin wixii xiriir nala soo xiriira.
Jiangsu Saddex Ido Garden Products Co., Ltd.
1, Warshad leh BSCI, oggolaansho Sedex.
2, Waqtiga dhalmada degdega ah
3, Tijaabooyin bilaash ah ayaa la heli karaa.
4, Dariiqooyinka xirmooyinka jilicsan ee buuxiya shuruudaha macaamiisha.
5, Xakamaynta tayada adag.
6, OEM & ODM waa la heli karaa.
7, 13 sano qeybiyaha xarumaha jardiinada, qeybiyeyaasha alaabada beerta, Aldi, Lidl, Tesco, Auchan, Walmart, Fix-price, iyo noocyada kale ee macaamiisha.
8, Kaladuwan shabaqyada jardiinada waa la dooran karaa.